Smartwatch: ụdị kacha mma, ozi ọma, nkuzi na ihe ndị ọzọ! - A gam akporo | Gam akporo (Peeji nke 3)
Michael Kors na-ebupụta oghere nweta nke smartwatches buru ibu ma dị arọ nke Android Wear nyere
Michael Kors bu ihe eji ama ama ama ama ama ama ya ama ama ama ama ama ya na ulo oru Wear.
Samsung kwupụtara Gear S3 kpochapụwo na Gear S3 ókèala
Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere Gear S2, Gear S3 bụ smartwatch ọhụrụ sitere na Samsung nke na-abịa na Tizen ma emelite ya na atụmatụ.
ASUS weputara ZenWatch 3 smartwatch na IFA 2016
Anyị enweworị otu n'ime smarwatches nke ngosi ngosi IFA 2016 a, ASUS ZenWatch 3. A wearable n'okpuru gam akporo Wear nwere mgbanwe na visual.
Xiaomi na-ekpughe Amazfit, smartwatch dị ọnụ ala nwere GPS
Xiaomi ekpughere Amazfit, smartwatch nwere ezigbo arụmọrụ ma lekwasị anya na ahụike nwere ike zụta maka $ 120.
Sony mara ọkwa smartwatch E-Ink ya, FES Watch U
Y’oburu n’acho onyonyo smartwatch nke izu uka ato, Sony ohuru FES Watch U nwere ike inwe nnukwu mmasi.
Meizu na-ekwuputa smartwatch mbụ ya, Meizu Mix
Meizu chọrọ ịchọta usoro nke ga - eme ka ọ gaa nke ọma na smartwatches na Meizu Mix, igwe elekere na - enweghị igwe dijitalụ.
Meizu dị njikere ịmalite smartwatch nke ya na August 10 ma ndị a bụ ihe onyonyo gosiri anyị ka ọ dị.
Apple ya na Watch na Samsung ya akara wristbands, bụ ndị kachasị mma afọ ojuju ahịa dịka akụkọ a si dị.
Abụọ na-enye ihe oyiyi na-egosi ọdịiche dị na nhazi nke Google smartwatches abụọ ahụ ga-abata mgbe HTC Nexus abụọ ahụ gasịrị
Google n'afọ a na-emepụta ngwaahịa nke ya. Ugbu a ọ bụ oge ịmara na ọ ga-eweta smartwatches abụọ na gam akporo Wear na Google Assistant.
Na Wear gam akporo ị nwere ike ịnweta ịnweta ahụigodo, dị ka Minumum ma ọ bụ Fleksy, iji nwee Snapkeys na usoro okirikiri.
Onye nchoputa nke OnePlus na-ekpughe eserese imepụta nke smartwatch
Onye nchoputa OnePlus kesara ihe osise nke echiche ya maka smarwatch nke akuko na mmepe na 2015.
BLOCKS bụ smartwatch modular nke anyị maraworị na echiche ya banyere ijikọ modulu ọhụrụ na-arụ ọrụ, dịka batrị ma ọ bụ ọkụ ọkụ.
Akpụkpọ anụ nche kacha mma maka gam akporo Wear
Taa, m na-ewetara gị akpụkpọ anụ kacha mma maka gam akporo Wear, elekere LCD mara mma n'ụdị dị ọcha nke ndị ghọrọ ụdị ejiji na 80s.
Xiaomi ga - ebido smartwatch ya n’agbata afọ ahụ ma chọọ na n’iri ike ọ ga - eru na uwe Garmin.
Ihe 4 kpatara Pebble ji akpọgide ya na smartwatches ya
Ihe 4 kpatara Pebble ji nwee ike ịkwado mkpa nke ọtụtụ ndị ọrụ gburugburu ụwa mgbe ị na-achọ smartwatch.
Kedu ihe Pebble chọrọ iju anyị anya n'oge a?
Obere okwute ga-eju anyị anya taa 24/05/16 na 17: 00 pm oge Spanish na nkwupụta maka ndị enyi.
A ga-arụ ọrụ wearable HTC na June
Ihe ejiji nke HTC na-eme ozi ọma maka afọ gara aga, mana ọ dị ka ọ ga-abụ eziokwu site na June
Xiaomi na-ebupụta Mi Bunny, smartwatch ya na GPS lekwasịrị anya ụmụntakịrị nọ n'ụlọ ahụ
Xiaomi Mi Bunny bụ elekere elekere nke nwere ọtụtụ ọrụ pụrụ iche iji mara ihe niile ụmụaka anyị na-eme.
Xiaomi kwadoro ọbịbịa nke smartwatch ya mana na-abanyeghị na nkọwa
Mgbe akụkọ ọjọọ nke taa gasịrị, Xiaomi ekwupụtala na Beijing na ọ ga-ebupụta smartwatch mbụ ya n'afọ a.
Huawei kpughere ya TalkBand B3 wearable ya
Huawei ewepụtala ya ọhụrụ Webandble Talkband B3 ụnyaahụ iji soro mwepụta nke Huawei P9 na P9 Plus
6 ese na gam akporo Wear na-ele anya dị ka kpochapụwo ma ọ bụ egwuregwu nke ndụ
Ọtụtụ ndị na-emepụta elekere nche na-abịaru Android Wear na atụmatụ nke aka ha dịka elekere 6 ndị a nwere ọrụ nwere ọgụgụ isi
Michael Kors na-ekwuwapụta akara elekere mgbanaka gam akporo maka ọdịda
Michael Kors bụ onye na-eche nche elekere nke na-abịaru nso na ọrụ smart nke Android Wear iji ree nzọ abụọ na-adọrọ mmasị na ọdịda a
Nixon Mission bụ gam akporo Wear nwere ike ịmaba ruo 100m miri
Na elekere Nixon a na-akpọ Mission, nke ahụ nwekwara gam akporo Wear, ị nwere ike ịmikpu onwe gị na ya ruo mita 100 miri
Fosil na-ekwuwapụta smartwatches ọhụrụ abụọ n'okpuru gam akporo Wear: Q Wander na Q Marshal
Fosil bụ ụdị ọzọ jikọtara Wear na nke akpọsala ngwaọrụ ọhụrụ abụọ yana OS a: Q Wander na Q Marshal
Ọnụahịa nke Bluboo XWatch kwadoro, otu Android Wear naanị maka euro 92
N'ikpeazụ, e guzobere ọnụahịa a na-apụghị imeri emeri nke Bluboo XWatch, nke ga-aghọ ọnụ ala gam akporo Wear n'ụwa
Elephone W2, Elephone na-ekiri ma na-enweghị gam akporo Wear
Elephone nwere ebe dị ụtọ iji malite smartwatch, Elephone W2, mana ọ gaghị agagharị n'okpuru gam akporo Wear.
Casio ejiriwo ememe CES mee ihe na Las Vegas afọ a iji gosi elekere mbụ ya na Wear gam akporo.
Egwuregwu Moto 360 dị ugbu a maka ịzụta na Spain maka € 289
Maka € 289 ị nwere ike ịzụta Moto 360 Sport smartwatch ọhụrụ na Spain, nke emere maka ndị na-agba egwuregwu
Akwụkwọ, egwuregwu maka gam akporo Wear maka oge ndị ahụ na-agwụ ike
Dị mfe ma kwụ ọtọ maka egwuregwu nkịtị, a na-egosi Papercraft dị ka arcade maka smarwatch n'okpuru gam akporo Wear.
Xiaomi na-ebupụta smarwatch mbụ ya, maka ụmụaka
Xiaomi na-ebupụta smartwatch mbụ ya na akụkọ ntolite. Emere elekere smart a maka ụmụntakịrị nọ n'ụlọ.
Huawei kpughere Huawei Watch maka ụmụ nwanyị na CES 2016
Huawei weputara uzo ndi nwanyi nke Huawei Watch na CES 2016 nke emere na Las Vegas na nke abuo amalitela na mmepe
The smartwatch HTC One n'okpuru gam akporo Wear ga-abata na ọnwa nke February
Igwe smarwatch HTC One nwere ike ịbụ ngwaahịa ọhụrụ sitere na ndị nrụpụta Taiwan a ga - enyere gị aka ịlaghachi na ikike gị.
Omate Rise bụ smartwatch na Android Lollipop na 3G na njikọ Bluetooth
Omate Rise bụ smartwatch kpamkpam nwere onwe ya n'ihi njikọta 3G. Uzo ozo di na ya nwere Android Lollipop.
Swatch bịanyere aka na nkwekọrịta maka Visa iji malite smartwatch ya na 2016: Swatch Bellamy
Swatch na Visa abanyela nkwekọrịta iji webata nke mbụ na mpaghara smarwatches na Swatch Bellamy.
Fosil Q Onye guzobere ya, Fosil’Woodar wear dị ugbu a
Fosil Q guzobere bụ smartwatch mbụ yana Android wear site na ama ama ama Fosil.
Huawei Watch dị na Storelọ Ahịa Google
Otu n'ime elekere mara mma mara mma, Huawei Watch, dị maka ịzụta na Spain.
Oulkitel A29: Chọpụta smartwatch na SIM maka $ 70 na nhazi mbu
Oultikel bụ smartwatch dị ọnụ ala nke na-aga ahịa taa maka $ 70 yana yana nke inwe oghere SIM ya. Ọ ga-aga nke ọma? Anyị na-agwa gị ...
TAG Heuer ejikọrọ, nke mbụ Switzerland na elekere gam akporo
Ndị ọrụ Switzerland gosipụtara smartwatch ya na Wear gam akporo, ndị TAG Heuer ejikọtara.
Bluboo Uwatch nwere ike ịbụ nke mbụ ejiri ọnụ ala Android Wear, n'okpuru $ 50
Taa, anyị ewetara gị onyonyo izizi nke Bluboo Uwatch, nke nwere ike ịbụ nke mbụ Android Wear smartwatch nke erughị euro 50.
Chronos chọrọ ime ka elekere ọ bụla bụrụ smartwatch
Chronos na-enye gị ohere ịtụgharị elekere ochie gị ka ọ bụrụ nke nwere ọrụ nwere ọgụgụ isi ka ịnweta ọkwa na ọtụtụ ndị ọzọ.
Rufus Cuff bụ ihe ejiji nke na-ewetara ekwentị gị aka
Rufus Cuff bụ ihe ejiji nwere nnukwu omume nke ịbụ "phablet nke smart smart" n'ihi na ọ dị ka ekwentị karịa elekere.
Akpụkpọ anụ nche kacha mma maka gam akporo Wear na-enye site na InstaWeather for Android Wear
Ọ bụrụ na, InstaWeather for Android Wear na-enye gị ihe kacha mma Akpụkpọ Ahụ maka Akpa Android gị.
XWatch, Bluboo si gam akporo Wear, na ezigbo ihe oyiyi
XWatch ga - abụ smartwatch izizi sitere na onye na - emepụta China bụ Bluboo. Ihe kachasị adọrọ mmasị bụ na ọ ga-ebu gam akporo Wear.
Fosil na-ekwuwapụta weilable Q Onye guzobere ya na Wear gam akporo
Gam akporo Wear bụ sọftụwia nke Fosil Q Onye guzobere ọhụụ, otu n'ime smartwatches anọ ahụ ekwuputara site na ụdị ejiji a.
InWatch Run, smart smart nke Alibaba
Onye China buru ibu, Alibaba, ewepụtala ihe ga-abụ smartwatch mbụ ya, inWatch Run.
Ngọngọ ma ọ bụ ihe ga-abụ Project Ara maka smart ese
Ngọngọ bụ ikpo okwu nke na-eso usoro enyere site na Ara Ara, mana ebe a nwere elekere smart modular.
Ihe mgbochi, smartwatch dị iche iche na-achọ ego
Elekere dị iche iche nwere ike ịbịa n'ọdịnihu ma gosipụta nke a na-ahụ etu enwere ọrụ dị ka Mgbochi.
Enwere ike igosi Meizu Smartwatch na October 21 ọzọ
Emeela Meizu smartwatch na enwere ike iweta ya na Ọktọba 21.
TAG Heuer na -ekere onyinyo onyonyo nke smarwatch ha ejikọrọ na ụbọchị nke ngosi ha
TAG Heuer Ejikọtara bụ smartwatch mbụ sitere na ndị na-emepụta elekere Switzerland nke a ga-ewepụta na Nọvemba 9.
Xwatch: Bluboo egwuregwu smartwatch ya na gam akporo Wear sistemụ
Taa, anyị na-ewetara gị sọọsọ na naanị scoop na mbido ederede mbụ nke Bluboo Xwatch, Bluboo mbụ egwuregwu smartwatch nwere ihe karịrị nkọwapụta teknụzụ na-atọ ụtọ.
Sony WENA smartwatch, nwere eriri na-adọrọ mmasị
Sony na-aga n'ihu ịkụ nzọ na ụwa wearable wee nwee smartwatch ọhụrụ nwere eriri na-adọrọ mmasị
Tag Heuer weputara Smartphone Wear nke ya na November 9 na ego nke $ 1800
TAG Heuer Carrera 01 ga-abụ kpọmkwem ihe nlereanya ahụ ga-abịarute na November 9 na ọnụahịa nke $ 1.800 na nke ahụ ga-enwe Android Wear dị ka ngwanrọ.
Ihe onyonyo nke Microsoft Band 2 nwere ike wepu na ihuenyo gbagọrọ agbagọ
Microsoft Band 2 bụ nzọ nke ndị sitere na Redmond iji soro usoro a nke ihe eji ejiji n'ụwa niile na ihe doro anya na ọ bụ ihuenyo curved
Alcatel Onetouch Go Watch, anyị nwalere smartwatch ọhụrụ nke Alcatel
Iji malite, akwa mkpuchi na eriri elekere nwere ike ịdị iche iche, yabụ Alcatel OneTouch GO Watch ga-abụ ngwaọrụ nwere nnukwu nhazi. N'ezie, alcatel-onetouch-go-watch-video dị njikere iguzogide, ọ bụghị mma.
Moto 360 2nd ọgbọ, Motorola ọhụrụ smartwatch
E gosipụtara Motorola ihe ọhụụ ọhụụ, Moto 360, na IFA 2015 nwere ụdị dị iche iche na-atọ ụtọ.
Onye na-emeputa ihe na America mebere Motorola arụsi ọrụ ike n'oge ọkọchị. Anyị ahụla etu o siri nyefee ekwenti atọ ...
Samsung Gear S2 na-atụ anya ogologo oge dị ebe a
Samsung na-ewetara anyị Gear S2 n'okpuru Tizen na ụdị abụọ dị iche iche na imewe, otu kpochapụwo na otu nke oge a maka obere ihuenyo okirikiri.
Enwere ike ịhụ Moto 360 2015 na ihe oyiyi
Ihe onyonyo ohuru nke Motorola smartwatch n'ọdịnihu na-egosi, Moto 360 2015. Smartwatch ọhụrụ a ga-enwe ọdịiche abụọ dabere na nha ya.
Motorola Moto 360S na 360L gafere FCC nke Brazil
Ihe omimi ohuru abuo agafeela njikwa ogo Brazil n'okpuru aha 360S na 360L. Ọ ga - abụ Moto 360S ọhụrụ na Moto360L?
Motorola agbagharala Moto 360 ọhụrụ?
A ga-ekpughere Moto 360 ọhụrụ na ọnwa ndị na-abịanụ, ọ bụ ezie na ọ dị ka Motorola nwere akwụkwọ amachapụrụ nke a na-akụzi na a ga-eyi.
Samsung na-esote elekere, Gear A, ga-enwe nsụgharị atọ
Samsung na-esote elekere gburugburu, nke aha ya bụ Gear A, ga-enwe nsụgharị atọ
Samsung kwadoro na smartwatch ọzọ ya, Gear A, ga-agbagharị
Onye nrụpụta nke South Korea akwadoro na smartwatch ya ọzọ n'okpuru Gear A ga-adị gburugburu ma nwee okirikiri na-agbagharị.
Ọgbọ nke abụọ nke Moto 360 gafere FCC
Ọtụtụ tụrụ anya na Motorola ga-eweta ọgbọ nke abụọ nke smartwatch ya, Moto 360, n'oge mmemme nke ụnyaahụ.
Samsung ga-akpọ smartwatch Samsung Galaxy Gear A
A ga-akpọ smartwatch ọzọ nke Samsung dị ka Galaxy Gear A. Nke a na-agba okirikiri smartwatch n'ikpeazụ agaghị eburu gam akporo Wear na ọ ga-eji Tizen.
Huawei Watch nwere ike ịdị na ahịa n'oge na-adịghị anya
The Huawei Watch, bụ otu n'ime smartwatches mara mma ma dị ike nke dị adị, ugbu a ọ na-aga ịkụ ahịa.
Cubot R8, smartwatch nke mbụ sitere na ndị nrụpụta
Onye na-emepụta ihe na China ewepụtala ihe bụ smartwatch mbụ ya, Cubot R8.
Gam akporo Wear nwere ihu nche ọhụrụ
Google eweputala ihu ọhụụ iri na asaa maka gam akporo Wear nwere ike ibudata ya na Google Play.
Huawei si smartwatch na-egbu oge
Igwe smartwatch mbụ nke ndị na-emepụta China na-egbu oge ọpụpụ ya. Huawei si smartwatch ga-abata site na nkeji nke atọ nke afọ a.
Oukitel A28 ọmarịcha smartwatch aluminom
Oukitel A28 bụ smartwatch mbụ sitere n'aka ndị na-emepụta China nke ga-abata na njedebe nke ọnwa.
Ngwa ndi kwesiri iji gam akporo Wear: Taa Murali na-eche ihu
Mural Watchface bụ otu n'ime ngwa ndị ahụ dị mkpa maka gam akporo Wear nke na-enweghị ike ị gaghị efu na Smartwatch gị
Tag Heuer Carrera Wearable 01, elekere okomoko iji zoo Apple Watch
Onye isi ụlọ ọrụ ahụ ekwuola na N'ajụjụ ọnụ aha ya smartwatch na gam akporo Wear ga-enwe: Tag Heuer Carrera Wearable 01.
Nke a nwere ike ịbụ smart smart Lenovo
Smartwatches dị na ejiji na ndị nrụpụta chọrọ inwe nke ha, ụlọ ọrụ China agaghịkwa adị obere.Ọ nwere ike ịbụ smartwatch Lenovo.
[APK] Wear Mini Launcher emelitere na mbipute 4.0 na ndozi dị mkpa
N'ebe a, anyị ga-ahapụrụ gị tupu onye ọ bụla ọzọ ụdị Wear Mini Launcher kachasị ọhụrụ na nke kachasị ọhụrụ maka nbudata ozugbo na ngwa na ntinye aka nke ya.
Gam akporo Wear 5.1.1 nkenye ọnọdụ bidoro site na ọtụtụ atụmatụ ọhụụ
Android Wear 5.1.1 bụ nnukwu mmelite maka ndị nwe smarwatch nke nwere sistemụ arụmọrụ a ka ọ na-agụnye ọtụtụ ndozi
Ngwa nke ọdịnihu: 1 na ndị ọrụ 20 ga - enwe smartwatch site na 2020
Ahịa smartwatch ga-amụba site na 7 n'ime afọ 5. A na-eme atụmatụ na otu n’ime ndị ọrụ 20 ga-azụta otu n’ime ngwaọrụ ndị a.
Nkọwa ndị ọzọ nke ọgbọ nke abụọ Moto 360
Anyị agafewo ihe karịrị otu afọ kemgbe ọgbọ mbụ nke Moto 360 pụtara. Ugbu a, anyị nwetara nkọwa nke ga-abụ ọgbọ nke abụọ ya.
Kpido Heuer's Android Wear smartwatch gears maka November
Tag Heuer nwere ihe niile dị njikere iji malite smartwatch ya na ngwugwu kachasị elu n'okpuru gam akporo Wear maka ọnwa nke ọnwa Nọvemba
Google na-akuziri gị otu esi eji mmegharị ahụ na Android Wear na vidiyo a
Google weputara vidiyo iji kụziere otu esi eme mmegharị na gam akporo Wear ka ịgbanwee n'etiti ọkwa
ASUS VivoWatch, smartwatch ọhụrụ ahụ nwere ikike nke ụbọchị 10
Ọnwa ole na ole gara aga, asịrị mbụ pụtara na-ekwu banyere enwere ike ASUS ga - ewepụta smartwatch ọhụrụ na ...
LG Watch Urbane dị na Spain maka € 349
Nwere ike ịzụta elekere ọhụrụ ahụ site na ụlọ ọrụ Korea, LG Watch Urbane, na Spain na ego nke € 349.
LG G Watch dara na nkwado Wi-Fi na gam akporo Wear
LG G Watch smartwatch fọdụrụ na nkwado Wi-Fi nke gam akporo Wear 5.1.
Taa, anyị na-egosi gị na vidiyo, ụzọ ziri ezi iji jikọọ ma ọ bụ mekọrịta ngwaọrụ gam akporo abụọ dị n'otu ọnụahịa gam akporo.
[Download APK] Ntughari 1.1 maka ngwa gam akporo Wear nwere ọtụtụ njirimara ọhụụ
1.1.dị XNUMX nke ngwa Wear gam akporo biara na nkwado maka ọtụtụ ngwaọrụ, ọhụụ ọhụrụ na ọtụtụ ndị ọzọ
Na 2019, ekenyela nde dolla 68 maka mgbasa ozi nke smartwatches
Dị ka otu akụkọ bipụtara na nso nso a, na 2019, a ga-ekenye $ 68 nde maka mgbasa ozi nke smartwatches.
DuWear Baidu ọzọ na Wear gam akporo
DuWear, ọzọ nke Baidu na Wear gam akporo, bụ sistemụ arụmọrụ gam akporo gam akporo zuru oke nke ga-adị maka ngwaọrụ gam akporo dị iche iche.
Huawei Watch ga-abata n’etiti afọ
The Huawei Watch, otu n'ime ihe eji ejiji nwere ụdị kpochapụwo nke nwere ọdịdị okirikiri, ga-akụrịrị ihe ngosi ahụ n'etiti afọ.
Google ekwuputala na Android Wear ga-enwe ndị mmekọ ọhụrụ ga-enye eriri dị iche iche maka smartwatches ha.
Ihe oyiyi mbụ nke ọgbọ nke abụọ nke Moto 360 na-edozi
Ọ bụrụ na ụbọchị ole na ole gara aga, anyị hụrụ akara ngosi nke ọhụụ ọhụrụ nke Motorola's smartwatch, Moto 360, ugbu a anyị hụrụ onyonyo izizi.
Ihe 12 kpatara ịzụta smartwatch dị ka Huawei si kwuo
Chineselọ ọrụ China ebipụtala na blọọgụ ya ihe iri abụọ iji zụta Huawei smartwatch.
Ihe ịrịba ama mbụ nke Moto 360 ọzọ ga-apụta
Ọgbọ ọzọ nke Moto 360 nọ na mmepe na ozi ndị ọzọ ga-amata n'oge na-adịghị anya dịka ụfọdụ ngbachi ahụ dị nso na ụlọ ọrụ ahụ.
Olio bu ihe nkpuchi $ 600 smartwatch
2015 ga-abụ afọ ebe smartwatches na-apụ, enweworị ọtụtụ ndị nrụpụta nwere mmasị ịmepụta nke ha, dịka nke Olio, elekere dị ọtụtụ ma dị oke ọnụ.
Xiaomi ga-eme emume ncheta nke ise ya site na mwepụta nke smartwatch ya na ekwentị ọhụrụ
Xiaomi gbanwere 5 na Machị 31, iji cheta ya, ọ ga - ebido igwe ele Mi Watch na ekwentị ọhụrụ ga - eme
The unofficial ndakọrịta nke iOS na gam akporo Wear nwere ike hụrụ na vidiyo ọzọ
A tọhapụrụ vidiyo ọzọ na-akwadoghị ikike nke iOS na gam akporo Wear.
Moto 360 kwesịrị ịbụ elele akpa
The Moto 360 dọọrọ mmasị ya imewe, ya gburugburu ikpe chetaara anyị nke ahụkarị nche nke a ndụ na e nwere ugbua ndị na-eji ya dị ka a n'akpa uwe nche.
Samsung Orbis, Galaxy Gear na-esote nwere ike ịbụ igwefoto na igwefoto
Samsung Orbis ga-abụ nzọ ọhụrụ nke Samsung, South Korea na-arụ ọrụ na elekere gburugburu yana igwefoto nwere ike ịmata ihe.
Xiaomi na aru oru na smartwatch gbara gburugburu
Companylọ ọrụ China, Xiaomi na-arụ ọrụ dị larịị, gburugburu igwe smartwatch nwere nnukwu dayameta, teknụzụ NFC n'etiti atụmatụ ndị ọzọ.
Anyị na-atụle LG G Watch R na Apple Watch
Anyị na-atụnyere LG G elele R na Apple Watch ebe anyị na-ekwu maka uru na ọghọm nke ọnụ abụọ ahụ. Kedu nke ka amasị gị?
Asus na-akọwa ihe kpatara eji zụta ZenWatch kama iWatch
Asus na-akọwara anyị n'ụzọ doro anya ma na-akọwapụta ihe kpatara ya jiri zụta Zenwatch kama Apple iWatch
Hazie Moto 360 gị tupu ịzụta ya na Moto Maker
Na Moto Maker, ngwa ọrụ ọhụụ nke ụlọ ọrụ America nyere, ị nwere ike ịhazi Moto 360 tupu ịzụta ya.
Gam akporo Wear ga-ogbugbu akara na mma Wi-Fi nkwado na ya ọzọ update
Gam akporo Wear ga-enweta ozi ọhụụ na mmelite ya na-esote, gụnyere njikwa mmegharị na nkwado Wi-Fi ka mma.
OJITO !! Zụta Apple si iWatch adịlarị omume, ọ bụ ezie na ọ bụ naanị imepụta nhụsianya emere na China
Internet na karịsịa ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nke ndị China jupụtara na nitomi nke iWatch Apple
Huawei Watch n'usoro ịhazi na euro 999 Ego ole ka smartwatch ga-efu?
Ọnụahịa mbu nke Huawei Watch na Amazon Germany atụwo ọtụtụ ụjọ, ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ kwusiri ike na ọ ga-efu ihe na-erughị € 999 nke ndoputa.
Ọganihu nke okomoko smartwatches Anyị na-eche ihu ọhụụ ọhụrụ?
Ọ bụrụ na Apple anaghị eju anyị anya na ị na-anwa ịbanye na mpaghara smartwatch okomoko, ụdị ndị ọzọ dịka Huawei na-eme. Anyị na-eche ihu ọhụrụ afụ?
Nyochaa si # MWC15 nke Sony Smartwatch 3. Ndị a bụ echiche onwe onye eziokwu
Lee ị nwere nyocha site na MWC15 nke a Sony Smartwatch 3, nke bụ n'ezie obere ọmarịcha gam akporo Wear smartwatch nke oge a.
Huawei Watch, smartwatch mara mma na Wear gam akporo na ọdịdị okirikiri
Huawei Watch bụ ihe eji ejiji n'okpuru gam akporo Wear nke onye nrụpụta China wepụtara na Mobil World Congress
Taa site na MWC15 na Barcelona, ​​anyị na-ewetara Filip, Smartwatch maka ụmụaka nke Telefónica ga-amalite n'oge na-adịghị anya iji nwee obere ụlọ dị.
Moto 360 dị ugbu a na Storelọ Ahịa Play na ọnụahịa nke euro 249.99, gbakwunyere ụgwọ mbupu 9.99
Meizu na-akwadebe smartwatch maka ọkwa ya Blue Charm
Meizu na-akwadebe smartwatch maka ọkwa ya Blue Charm. Ngwaọrụ nwere okirikiri nke ga - apụta maka ọnụ ahịa ya na - adọrọ mmasị
Audi na-eji ọmarịcha LG smartwatch ọhụrụ ọhụụ na nnọkọ ogbako ya
Audi jiri enwmatic LG smartwatch n'oge ogbako ya. O yiri ka ọ ga-abụ elekere naanị maka ndị na-emepụta ya.
Nnukwu mmelite nke gam akporo Wear Lollipop bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na njikarị batrị
Nnukwu mmelite nke gam akporo Wear Lollipop bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ndụ batrị, na-eru mmelite nke 100 x 100 nnwere onwe.
MyRoll gallery, a na-akpali akpali foto gallery maka gị Smartphone na gị gam akporo Wee smartwatch
MyRoll Gallery bụ foto na-akpali akpali na foto foto izizi maka Wear gam akporo gị.
Motorola gosipụtara ya na a ga-etinye mmelite nke Moto 360 na Lollipop Android na ụwa taa, Disemba 15, 2014.
Etu esi melite LG G Watch na gam akporo 5.0.1 Lollipop
N'ebe a, m na-egosi gị ihe niile ịchọrọ iji melite LG G Watch na Lollipop na aka ma ghara ịnwụ ịnwale
Denye !! LG G Watch 99 Euro maka obere oge
Ugbu a bụ oge iji nweta LG G Watch maka naanị 99 Euro na mbelata nke 100 Euro maka obere oge
Ga-enwe ngwa ọdịnala n'ihi gam akporo Wear; Taa ọnụọgụ abụọ Watch Face
Taa, m kwadoro Binay Watch Face, ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ maka elekere gam akporo gị. M na-agụnyekwa nkọwa nke otu ụdị elekere abụọ a na-arụ.
Sonim XP7 Oke, ihe kachasị sie ike n'okporo ụzọ na mbara ala nwere ụbọchị 41 nke nnwere onwe
Battery ga-enwe batrị 41 ụbọchị nke a Sonim XP7 Extreme smartphone nke na-abịa soro ndị egwuregwu egwuregwu nwere oke egwu
Ga-enwe ngwa ọdịnala n'ihi gam akporo Wear; Taa Ngosipụta Ihie
N'oge ọ bụghị nsogbu, mana ị nweghị ike ịgbanwe nchapụta ihuenyo nke smartwatches na gam akporo Wear. Ugbu a Ngosipụta Ngosipụta na-emere gị ya.
Ngwa dị mkpa maka gam akporo Wear: Taa @here, ngwa iji mara ọnọdụ gị ugbu a n'oge niile
N'ebe a maka Android Wear na-enye gị ohere ịmara ọnọdụ gị ugbu a n'oge niile site n'igosi gị adreesị zuru oke na ọnọdụ kpọmkwem na Maps ozugbo na Wareable gam akporo gị. Gam akporo gam akporo
Ihe niile nke gam akporo ọhụrụ wear 4.4W2 melite na-enye anyị
N'ebe a, anyị na-akọwa site n'enyemaka nke vidiyo ihe niile mmelite ọhụrụ gam akporo Wear 4.4W2 na-enye anyị
Ngwa dị mkpa maka Wear gam akporo, taa gam akporo eyi WatchFaces
Gam akporo Wea WatchFaces na-enye anyị ohere ịchekwa elekere nke anyị maka gam akporo Wear n'ụzọ zuru oke.
Ngwa ndi kwesiri gam akporo Wear: Taa Twitter diri Wear nke gam akporo
Twitter maka gam akporo Wear na-enye anyị ohere ịnweta akaụntụ Twitter anyị site na nche nche na sistemụ arụmọrụ gam akporo Wear.
Ngwa ndi kwesiri gam akporo Android Wear: Taa, I na-eyi Internet Browser
Wear Internet Browser bụ ihe nchọgharị weebụ zuru ezu nke ahaziri ka ọ rụọ ọrụ zuru oke na gam akporo Wear ngwaọrụ dịka Moto 360.
Nyochaa nke Moto 360, smartwatch kachasị mma na Wear gam akporo
Mgbe anyị nyochachara Moto 3 maka izu 360, anyị ewetara gị nyocha zuru oke nke ọhụụ ọhụrụ Motorola smartwatch.
Ngwa ndi kwesiri ime maka gam akporo eyi: Ubochi ugbu a, Yiri Mini Launcher
Taa, achọrọ m iwepụta Wea Mini Launcher, ihe mbido mbụ maka gam akporo Wear nke na-enye anyị ọrụ na ịba uru kwesịrị ekwupụta.
Ngwa kachasị mma maka gam akporo Wear, taa Stellio Music Player bụ ezigbo ọkpụkpọ egwu maka Smartwatch gị
Egwu Stellio bụ ezigbo egwu egwu maka smartwatch gị ma ọ bụ smartwatch ya na sistemụ arụmọrụ gam akporo Wear.
Ndụ Moto 360 smartwatch batrị abụọ na mmelite KGW42R
Mmelite KGW42R na-eme ka ndụ batrị dị okpukpu abụọ ma ọ bụrụ na agbanwere ọnọdụ ọnọdụ Moto 360, na-eru elekere 30 nke nnwere onwe
Adịgboroja gam akporo: The Incgbanwe Mgbanwe Smartphone Project
Taa achọrọ m iwebata gị n'okwu dị ịtụnanya nke Smartphone na-agbanwe agbanwe, 6 "Smartphone nke anyị nwere ike ịbanye na nzuzo dịka gam akporo Smartwatch.
5 ga-enwerịrị ngwa Android wear maka LG, Samsung ma ọ bụ Motorola smartwatch ma ọ bụ smartwatch gị
Alcatel OneTouch Wave, smartwatch nwere akara okirikiri maka ihe na-erughị euro 150
Ọ bụrụ na ị na-achọ ezigbo smartwatch dị ọnụ ala nke nwere mma mara mma, nke ọhụrụ Alcatel OneTouch Wave nwere ike bụrụ nhọrọ mara mma.
Ọtụtụ ndị ọrụ na-eme mkpesa banyere nsogbu na ihuenyo Moto 360, nke mgbe obere oge dị ka blur
TAG Heuer's smartwatch na ime
TAG Heuer ekwuola otu ha ga-esi malite usoro nke igwe elekere ma ọ bụ elekere anya
IFA14: Smartwatch kacha mma, nke kacha njọ na ndakpọ olileanya
Lee, ana m ahapụrụ gị n'ụdị ọkwa, nke bụụrụ m Smartwatch kacha mma, nke kachasị njọ na ndakpọ olileanya nke IFA14 a mere na Berlin.
Anyị nwalere Samsung Gear S, smartwatch ọhụrụ Samsung na Tizen
Anyị na-enyocha gị Samsung Gear S, smartwatch Korea ọhụrụ na Tizen
inWatch Pi «MX4 Edition»: nzọ nke Meizu na smartwatches maka € 50
Ọ bụ ezie na ọ jụrụ ogologo oge ịkpọpụta, inWatch Pi "MX4 Edition" bụ nzọ nke Meizu na ụwa nke ọnụ ala smartwatch nwere ọnụ ahịa € 50.
Sony Smartwatch 3 na Wear gam akporo ka ewepụtara ya na IFA14
N'ikpeazụ, ụlọ ọrụ Japan na-esonye na gam akporo Wear bandwagon ma gosipụta ọhụụ Sony Smartwatch 14 na IFA3.
The Omate X bụ a smartwatch enweghị gam akporo Wear na a adịchaghị imewe maka 129 XNUMX
Omate X bụ otu n'ime nzọ kachasị mma mgbe a bịara smartwatches iji jikọta ya na ekwentị gam akporo anyị
LG G Watch 2 smartwatch maka Septemba? [Emelitere]
Mgbe ọbụlagodi ọnwa atọ agafebeghị G Watch, LG G Watch 3 ga-eweta na nzukọ IFA na Berlin na Septemba.
Motorola Moto 360: ọzọ oyiyi na o kwere omume tọhapụ ụbọchị leaked
Motorola Moto 360 bụ smartwatch na-esote ụlọ ọrụ ahụ, ma taa foto ole na ole na ụbọchị mmalite na Europe abanyela.
Gini mere anyi ji acho smartwatch ma obu smart watch?
A smartwatch na-aghọ otu n'ime ngwaọrụ ndị nrụpụta na-anwa ire ọnụ ahịa niile, ọ dị anyị mkpa n'ezie?
Ngwa kachasị mma maka G Watch gị, taa Wear Audio Recorder
Anyị na-ebupụta ngalaba ọhụrụ na Androidsis a na-akpọ ngwa kacha mma maka G Watch gị nke anyị ga-ewebata gị na ngwa ndị dị ka Wear Audio Recorder.
Were Google Camera were foto gị si smartwatch gị na Android Wear [APK Download]
Ntughari ohuru nke igwefoto Google na-eweta ohere nke iji ihe nlere gam akporo Wear dị ka ngwaọrụ dịpụrụ adịpụ iji weghara ihe site na smartphone ma ọ bụ mbadamba
Rụọ ọrụ mmepe nhọrọ na gam akporo Wear
Anyị na-egosi gị otu ị ga-esi rụọ ọrụ nhọrọ mmepe na gam akporo Wear iji mepee igwe elekere gị ka ị nwee ike ịwụnye ROM
Etu esi etinye Gohma ROM na LG G Watch
Gohma ROM bụ omenala mbụ maka gam akporo Wear na nke mbụ maka LG G Watch nke na-eme ka batrị na arụmọrụ nke nche ahụ ka mma.
Ngwa kachasị mma maka elele anya: Taa Bchụ nta
Taa, na mmalite nke ngwa ngwa maka ese elekere, anyị chọrọ ịkekọrịta otu n'ime ngwa ọhụụ kachasị maka ngwa ahịa gam akporo.
Fleksy na-ebupụta ngwa Fleksy Messenger maka Samsung Gear 2 smartwatch
Fleksy na-ebupụta ngwa Fleksy Messenger na Galaxy Gear 2 iji nweta uru nke keyboard ya
Ahịa smart wristbands dị okpukpu anọ karịa nke smartwatches
Ahịa smart wristbands dị okpukpu anọ karịa nke smartwatches.
Bluetooth Smart Wrist Watch U8 maka gam akporo, gịnị kpatara ya?
Ọ bụrụ n ’ị zụta Bluetooth Smart Wrist Watch U8 mgbe ahụ ị ga - ejikwa ọtụtụ ọrụ sitere na ekwentị ekwentị gam akporo gị.
Samsung ga-eweta Samsung Galaxy Note 4 na Samsung Gear 3 na Septemba
Ọhụrụ asịrị na-egosi na a ga-ewepụta Samsung Galaxy Note 4 na mbipụta ọzọ nke IFA, yana Samsung Gear 3
6 gam akporo smartwatches dakọtara maka ihe na-erughị € 100 (Infographic)
N'oge agha nke smartwatches, ọ dịka ọ dịkwa ohere maka ụwa ọnụ ala. Taa, anyị na-ewetara gị ihe infographic na ruo 6 maka ihe na-erughị € 100.
SPC Smartee Watch bụ ọnụ ala na Spanish smartwatch
Enwere ike ịzụta SPC Smartee maka € 99 ma bụrụ smartwatch nke ụlọ ọrụ Spanish mepụtara
Sony weputara ngwa mgbakwunye Instagram maka SmartWatch 2
Ngwa ndọtị Instagram maka SmartWatch 2 dị ugbu a na Storelọ Ahịa Play iji nata ọkwa niile sitere na netwọkụ mmekọrịta ama ama
Sony na-emelite ngwa mgbakwunye Smartwatch 2 na nchịkọta akụkọ Watchface, ihe mgbako na ndị ọzọ
Sony Smartwatch 2 ngwa ngwa melite na-eweta ihe mgbako, ihe ngosi ohuru ohuru na otutu ihe
Ogidi atọ nke Android Wear dabeere
SDK echekwala ihe omuma banyere ikpo okwu ohuru a na-akpọ Android Wear nke Google malitere taa.
MWC 2014, anyị nwalere Samsung Galaxy Gear 2
Nnyocha vidiyo nke Samsung Galaxy Gear 2, Samsung Smartwatch kachasị ọhụrụ gosipụtara na 2014 WC na Barcelona.
Blọ ahịa ngwa ngwa Pebble smartwatch beta na-eme na gam akporo
Site ebe a ị nwere ike ibudata beta nke Pebble smartwatch appstore. Ọ bụ ezie na ọ nwere ọtụtụ nsogbu, ị nwere ike ịmalite nbudata ngwa.
GooPhone nwere onwe ya zuru ezu Smartwach
GooPhone gosipụtara onwe ya zuru ezu Smartwatch nke na-adịghị mkpa ijikọ na gam akporo ọzọ, ọnụ nke nwere ike ịkpọ ma nata oku.
Wolder weputara ama ama nke Spanish abuo
Wolder banyere ụwa nke ekwentị mkpanaaka na gam akporo ejiri aka ya na ụdị abụọ dị ala dị ka mismart WINK;) na SMILE :)
Lenovo Vibe Z phablet na-abịa na Snapdragon 800 mgbawa na Sony Exmor RS igwefoto
Lenovo na-ewebata ezigbo ngwaọrụ mkpanaka n'oge na-adịbeghị anya dị ka nke a Lenovo Vibe Z nwere mgbawa Snapdragon 800, igwefoto Sony Exmor RS na ezigbo ihuenyo.
Sony’s Smartwatch 2 ka emegharịrị site na iji nhọrọ dị oke egwu a ga-eyi na nkwojiaka gị
SmartWatch ga - apụta maka Septemba a, jiri ezigbo atụmatụ na atụmatụ mara mma, anyị ga - ahụ ma ọ ga - ezute atụmanya.